India: Ireo Loharanom-baovao Tsara Indrindra Sy Ireo Fanadihadiana Mikasika Ny Fifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Aogositra 2018 4:50 GMT
Ireo vohikala ireo, anefa, manao fifaninanana mivantana amin'ireo vohikala madinika noforonina ho an'ireo fifidianana an'ireo media mahazatra – Hindustan Times/ Google, TOI, Mint, DNA, The Hindu, Yahoo!, MSN, Rediff, NDTV, IBN Live, India Today, The Week, Economic Times, India TV, Aaj Tak, Business Standard, BBC sy Al Jajeera– ary mila manolotra zavatra miavaka mba hanaporofoana ny filàna azy ireo [amin'ny teny anglisy avokoa ireo rohy voalaza].
Manana pejy mora jerena ny DNA, India Today, Business Standard ary ny IBN Politics, nosoratan'ireo mpanoratra fanta-daza.
Ny vohikala madinika ho an'ireo fifidianana, novolavolain'ny gazety isanandro Hindustan Times/ Google, dia manolotra an'ireo gadgets-n'ny Google izay hahafahan'ny mpamaky mandrafitra ny pejy iGoogle-ny manokana.
Ny blaogy Hindu Election Blog, miantrano eo amin'ny WordPress, dia ahafahana mamandrika tenifototra sy sokajy manokana.
Ny MSN mitondra angona iray amin'ireo vaovao izay azo sivanina isaky ny kandidà, antoko na fanjakana
Ny vohikala Outlook India Election Blog dia mikajy manokana ireo rohy miaraka amin'ny pejin'ireo vohikala hafa .
Amin'ireo mpisehatra vaovao, angamba ny IndiPepal no tena sahisahy indrindra, miaraka amin'ny blaogin'ireo mpanadihady be mpahalala.
India Voting sy Engage Voter ihany koa dia manana vohikala tena manakarena miaraka amin'ireo lahatsoratra somary mahaliana.
Ny vohikala BlogAdda no mpanangona an'ireo media mpandray anjara amin'ireo fifidianana, tsara fanolorana, miaraka amin'ireo sary, lahatsary ary lahatsoratra nalaina avy tamin'ireo blaogy marobe natokana ho an'ny fifidianana. OneVote ihany koa dia mpanangona an'ireo media mpandray anjara izay manangona sary, lahatsary, lahatsoratra, ary vaovao mifandraika amin'ireo fifidianana ireo.
Vote Report India, vovonana iray iombonana natao ho fanarahamaso an'ireo fifidianana 2009, mikendry ny hanome vaovao ara-potoana momba ireo tsy fanarahan-dalàna ao anaty zotram-pifidianana amin'ny alalan'ireo tatitra, lahatsoratra, sary, lahatsary ary ireo filazàna momba ireo fifidianana avy any amin'ireo loharano tena azo ianteherana, avondrona amina toerana tokana, miainga avy amina sarintany iray ifandrimbonana (jereo ny lahatsoratray teo aloha mba hahazoana ireo antsipirihany).